Maitiro ekuisa macOS Mojave pane "isingatsigirwe" Mac | Ndinobva mac
Pane nzira yekumisikidza macOS Mojave pane iwo makomputa ayo Apple asinga gadzirise zviri pamutemo uye nhasi ndizvo chaizvo zvatichaona. Mune ino kesi, chakakosha chinhu ndechekuti zvive pachena kuti iri imwe nzira yakaoma uye haizove yakapusa sekunge iyo Apple pachayo yakabvumidza kuiswa paMacs edu asina kutsigirwa.
Chinhu chakanakisa ndechekuti mushambadzi agadzira chishandiso chake icho chinotibvumidza isu kuti tiite kumisikidza isinganetsi, asi kunyangwe nayo Haisi nyore maitiro uye inoda matanho ako. Chishandiso chekugadzirisa zvigamba zvinonzi Patch Kugadziridza zvinowedzerwawo, chimwe chinhu chinokosheswa mune idzi kesi
Muvhidhiyo iyi ye mhanduru1 tinogona kuona maitiro nenzira yakapfava mune ingori pasi pehafu yeawa. Zvekugadzwa kweMacOS Mojave, zvakateedzana zvinodiwa zvinodiwa kuti tisiye kumashure kwevhidhiyo uye zviri pachena chigamba chakagadzirwa na dosdude1 yekumisikidza iyo inoda 16GB USB yekumisikidza. Tichawana zvese izvi murondedzero yevhidhiyo uye tinovasiyawo pazasi pevhidhiyo.
Mac Pro, iMac, kana MacBook Pro 2008 zvichienda mberi
MacBook Air kana MacBook Unibody aluminium kunonoka-2008 kana gare gare
White Mac Mini kana MacBook kutanga kwa2009 zvichienda mberi
Xserve kubva pakutanga kwa2008 kana gare gare
Iyo Mac rondedzero izvo hazvisi zvinoenderana kunyangwe neiyi system kuisirwa Ndizvo:
Maitiro ekuvandudza macOS Mojave
2006-2007 Mac Pro, iMac, MacBook Pro uye Mac Mini
Iyo chete iMac7,1 ya2007 inotsigirwa kana iyo CPU yakagadziridzwa ikave yePenryn-based Core 2 Duo, senge T9300
MacBook4,1 -MacBook Air kubva muna 2008 (MacBookAir1,1)
Chinhu chakanyanya kukosha kuve nechombo Patcher Chishandiswa chinowanikwa mubhuku uye mune rondedzero yevhidhiyo. Kana iwe uchida rumwe ruzivo kana uine matanho aripo, iwe unogona kuona iyo yekuvandudza webhusaiti kwaunowana tsanangura zvese izvi zvekuisa bhuku. Iye zvino une zvese zvaunoda kuti ukwanise kuona Mac yako isingatsigirwe neMacOS Mojave uye uchave uri mutariri wekusarudza kana zvakakodzera kuita kuisirwa uku kana kwete.
Zvatinofanira kutaura nezve iyi macOS Mojave yekuisa maitiro ndeyekuti izvi hazvisi zvevashandisi vese mac Sezvo iri yekumisikidza nzira isiri nyore uye inogona zvakare kusashanda zvachose paMac yedu nekuda kwematambudziko ekuenderana nemifananidzo, zvinogona kunge paine kukundikana nekubatana kweWiFi, iyo Bluetooth, kukundikana mune trackpad kana zvakafanana. Ichi chinhu icho mugadziri uye mugadziri wedzidziso yaanotiudza nezvazvo, saka hachisi chinhu chinofanira kudzoka kwatiri kana macOS Mojave malfunctions akaitika.
Kune rimwe divi, ini handikurudzire kuisirwa mumidziyo iyo inofanirwa kushandiswa zuva nezuva, basa kana zvakafanana kune zvambotaurwa. Saka kutanga tataura kuti pamusoro pekuwedzera kumisidzana kuisirwa kupfuura zvakajairwa, zvese zvinogona kusashanda zvakakwana paMac yedu pasina rutsigiro rweMacOS Mojave. Ibasa remumwe neumwe kuita kumisikidza kana kwete uye timu yeSoy de Mac haina mhosva kune chero matambudziko angamuka kubva mukumisikidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuisa macOS Mojave pane "isingatsigirwe" Mac
Josep Perez akadaro
Chekutanga pane zvese ndatenda nemupiro wako.
Kutevera nhanho dzandaisa Mojave pane yangu iMac 12,2 uye nzira yacho yashanda, asi mushure mekumisazve chidzitiro inoratidza ese mavara akachinjwa.
Ini ndinofungidzira panofanira kuve nekusawirirana pamwe nemakomputa mifananidzo.
Unogona kufunga mhinduro here?
Pindura kuna Josep Pérez
Mubvunzo unenge wakakodzera here? uye kurasikirwa nekuwanda kwekuita? Nekuti kana uchigadzirisa, pamusoro pekunyevera kuti inogona kukundikana uye inofanira kutanga kubva pakutanga, hapana kutaura kwekuita
Ini ndakaiisa muImac kubva pakati pa2010 uye mavara akachinjwa uye magirafu akaipa. Kana vachifambisa mahwindo vanovharwa.
Mhoro. Ndine dambudziko rakafanana. Mavara akachinjwa uye tsvuku yakanyangarika. Chero mhinduro?
Ini ndiri mudambudziko rakafanana, mawana mhinduro here?
Ini ndinobatana, zvakafanana zvinoitika kwandiri sekune vamwe vane mavara
Ini ndakaiisa pane kunonoka 2009 MacBook Unibody uye inoshanda chaizvo. Ini ndakaiisawo pane 2010 MacBook Air, uye inoshanda mushe futi. Wakatsemura sarudzo dzakatemwa neyakagadzika chigamba yemhando yega yega pakupera kwekumisikidza?
Ehe, inoshanda, haishande chaizvo, zvinoenderana nekuti unoishandisa sei, zvese zvinokushandira kana kwete. Iyo inononoka kudzika yakawanda, uye iyo system yakarova pazuva rekutanga. Zvakare haishande zvakafanana, kana virtualbox, kunze kwekunge iri windows XP. Ini ndaifanirwa kudzokera kuOS X El Capitan uye zvese zvaive zvakakwana zvakare, zvakadaro ndatenda, unofanira kuedza. MacBook Pro 17 ~ 5,2 Mid 2009. SSD 8GB ye RAM inonyanya kugona. Funga nezvazvo usati waisa. kwaziso
MacBook Pro 13 »kunonoka 2011,
Mifananidzo: Intel HD Graphics 3000 512 MB,
16gb gondohwe uye ssd.
Yakagadzwa pasina dambudziko, asi zvakataurwa nevamwe vashandisi, ine chigamba pane iyo graph ini handina kana kucherechedza. Asi kana iyo pc, virtualbox uye mamwe mapurogiramu ekuvandudza kana dhizaini ari kunonoka, ini handitombo kukuudza.
Ini ndinonyatsoda iro rima theme ravakaunza muMojave, asi, hazvina kukosha kwandiri kuti ini ndinoshanda mazuva ese pamac, haina kunyatso kugadzirirwa, kune yangu laptop.
Mupiro mukuru kune anovandudza chigamba +1!
Ruben Reyes akadaro
Isa Mojave pane Macbook pro 2011, modhi 8.2. pasina matambudziko akakura. Ini ndakatevera maitiro ekugadzira chigamba. Nekudaro, kune avo vanosarudza kuita kudaro, mushure mekuisa imwechete, hazvizotanga, ivo vanofanirwa kubhuroka kubva kuUSb nekumisikidza uye kumhanyisa chigamba, iri kumagumo muhwindo rinovhura muzasi kuruboshwe chikamu. Ikoko ivo vanotsvaga iyo modhi yeMac yako uye vanoshandisa inoenderana chigamba. Chokwadi, mune yemuenzaniso wangu, iyo yakatsaurirwa radeon mifananidzo haishande nekumhanyisa. Ndakaedza kuisa yekupedzisira cut pro vhezheni 10.4.5 uye inoti girafu haina kutsigirwa. Nekudaro, ndichitevera imwe dzidziso kubva kune iyeyu mushambadzi ndakaremadza iyo radeon mifananidzo uye voila ine yakasanganiswa giraidhi iri intel hd 3000, Yekupedzisira yakatemwa pro, yazvino vhezheni inoshanda zvine mutsigo. Asi hongu, kana uchiremadza graphic yakatsaurirwa, kupenya kwekudzora hakushandi kana kumbomira kana uchivhara muvharo. Mumwe kune mumwe. Mukupedzisa, zvese zvinoshanda kunze kweizvo zvandataura, unogona kuzvisiya usina kuremadza girafu asi zvirongwa zvakaita sekupedzisira kucheka izvo zvinoda kumhanyisa hazvishande. Vamwe vakaita semafungiro epro x vanoshanda zvakanaka uye mashandiro acho akanaka, zvakapetwa kagumi kupfuura nehusiku hweHigh sierra iyo isina kumboshanda kunyange zvine mutsindo pakombuta yangu.
Pindura Rubén Reyes
MacBook Pro pakati pa2009
Fusion Dhiraivha 1,12 TB
Inoenda chaizvo. Screen color matambudziko anogadziriswa nekubvisa iyo yekujekesa sarudzo kubva pane yekuwanika skrini sarudzo.
Chinhu choga chisiri kushanda iSight kamera iyo yakanyorwa senge isipo.
Iko kuita kwacho kwakatsetseka, pamwe nekuti iwo magiraidhi eiyo modhi ndeye nVidia uye kwete ATI. Zvimwe zvinhu zvese zvakanaka.
Carlos, chero kurudziro yekuti iwe utipe dzidziso yekuti ungazviita sei? Ini handikwanise kuwana iwo maficha muFinal. Iyo photosho inomhanya chaizvo asi ini handisi kuona iwo mufananidzo mune chero chirongwa chekugadzirisa.
Pindura kuna Alejandro,.
Iyo Dude akadaro
Iwe wakadhawunirodha sei faira rekumisikidza? MuAppStore inondiudza kuti haina kutsigirwa uye haindibvumidze kurodha pasi.
Pindura kune Iyo Dude
Zvakanaka. Ndakangoona kuti inogona kudhawunirodwa nepatcher
Ndine macbook pro 2011, 13 ″ inch kutanga kwa2011
processor: 2.3GH3 intel musimboti i5
Ndangariro: 8GB 1333 mH3 DDR3
Mifananidzo: intel HD mifananidzo 3000 512 MB
Ini ndaida kuziva kana uchigona kuchinja kubva maverick kuenda kune imwecheteve? Uye kana zvichikwanisika, zvaizoitwa sei kana isingawanikwe kurodha pasi kubva kuApp Store ???
Mhoroi, iyo yakakwira iwe yaunogona kuisa pane iyo komputa zvinoenderana neApple ndeiyi:
macOS Yakakwira Sierra 10.13.6 (17G65)
Kutevera dzidziso yechinyorwa, ini handizive kana uchigona kupfuudza Mojave kuchikwata icho, kunyangwe iwe uchifanira
Yakashanda zvakakwana kwandiri! Pane Macbook mhepo pakati pe2011 Core i5 uye 2G kubva kuRam.
Kuiswa zvigamba zvinoshanda uye zvese zvakanaka, zvirinani kupfuura yakakwira sierra
Ini ndinotora sei kopi yeMojave?
Kana iwe ukatevera iyo dosdude1.com dzidziso, hauzorasikirwa. Iwe unogona zvakare kubva kuMojave kubva ipapo.
Ndiri kuishandisa muna 2009 MacBook Pro (16 Gb RAM uye SDD) uye chokwadi ndechekuti hapana matambudziko makuru. Ndinofanira kutaura kuti ini handishandisi Hofisi kana Photoshop kana chero zvakadaro. Zvemahofisi madiki otomatiki andingangoda, ini ndine zvirongwa zveGoogle mugore, nezvandasara nazvo.
Zvisinei ini ndine mubvunzo wekubvunza: kasingaperi anondiudza kuti ndinofanira kukwidziridzira kuBig Sur, izvo zvandisingade kuita, zvirinani zvisati zvaitika Uye ndine kusahadzika kwakakomba kuti inogona kutanga Asi nekusabvuma iyi yekuvandudza, hazvindibvumidze kurodha pasi mamwe ese magadziriso angandifarire (ekuchengetedza mabara eMojave, Zvinyorwa zvePrinta, nezvimwe ...). Chero zano?
Pindura kuna Julius